Nafiny, tanora mahay mandray andraikitra, mikasa ny hanohy fianarana eny amin'ny anjerimanontolo | UNICEF Madagasikara
Nafiny, tanora mahay mandray andraikitra, mikasa ny hanohy fianarana eny amin'ny anjerimanontolo
22 Desambra 2020
Nafiny, tovovavy 15 taona, dia avy amin'ny fianakaviana ahitana zaza valo mianadahy. Voasoratra anarana ao amin'ny sekolim-panjakana ao Amboasary Atsimo izy. Toy ny zatovo maro ao amin'ny sekoly dia mamonjy fodiana any amin'ny tanàna nahalehibe azy izy isaky ny faran'ny herinandro. I Nafiny tokoa mantsy dia avy any amin'ny fokontany Berenty Ofisialy ao amin'ny kaominin'i Behara, am-polony kilometatra miala ny sekoliny. Manofa bisikileta i Nafiny mba hahafahany mandroso sy miverina mankany amin’ny tanànany. Ny fandehanany any amin’izany sekoly izany dia mitaky fandaniana mitohy ho an'ny fianakaviany.
Soa ihany i Suzette, 40 taona, renin'i Nafiny fa misitraka ny tetik’asa Fiavota izay vatsian'ny Sampan-draharaha Koreana misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena KOICA vola. Raha ny marina, nandritra ny telo taona mahery izy no nahazo fanampiana ho an’ny fanabeazana ny zanany lahy 11 taona, Tonombavaka. Nahavita nitahiry ampahany tamin'izany vola fanampiana azony tsy tapaka izany izy ary ankehitriny dia miompy osy valo ary manana tany fambolena mangahazo sy tsaramaso. Rehefa nandeha ny fotoana dia nisy olona hafa tao amin’ny fianakaviana ihany koa afaka nisitraka izany tetik’asa Fiavota izany.
Amin'izao fotoana izao, i Suzette dia afaka manokana vatsy vitsivitsy ahitana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavan'andro ary koa vola kely entiny miantoka ny fanomezana sakafo telo isan'andro ho an'ny zanany vavy Nafiny rehefa mijanona irery any Amboasary izy, ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Eny tokoa, i Nafiny dia mipetraka amin'ny trano akaikin'ny sekoliny izay nofain-dreniny entiny manohy ny fianarany.
Mety hitera-doza ho an'ny zazavavy kely 15 taona ny mipetraka irery ao amin'izany toerana izany. Na izany aza anefa, i Nafiny dia manana fitondran-tena tompon'andraikitra amin'ny maha-tanora azy. Tsapany tanteraka ny ezaka rehetra ataon'ny reniny mba hahafahany manohy ny fianarany.
« Miala voly miaraka amin’ny namako any an-tsekoly aho, kanefa hatreto aloha dia ferako amin’ny resaka maha-mpinamana izany; mbola tsy nanana fifandraisana akaiky tamina zazalahy aho. Mifantoka hatrany amin'ny tanjoko aho: ho lasa mpampivelona, » hoy izy. Nandray io fanapahan-kevitra io izy taorian'ny hetsika fanentanana maromaro: amin'ny lafiny iray teny anivon’ny sekoly izay nataon'ny mpampianatra, fa koa tamin'ny alàlan'ny hetsika nokarakarain’ny tanora mpanentana eny anivon’ny vondrom-piarahamonina izay miandraikitra ireo fepetra mikasika ny tetik’asa fanampiana ara-bola Fiavota.
Manoloana ny toe-javatra mitranga dia nanamafy tamim-pireharehana i Suzette: « Matoky ny ho avin'ny zanako vavy aho! »
Manome hery ny fianakaviana ny programa FIAVOTA
Noho ireo zaza dimy iantsorohany dia nisitraka ny fandaharan’asa fandefasana vola FIAVOTA i Nirina sy Lovasoa
Hiatrika voalohany fanadinam-panjakana amin'ity taona ity
Hiatrika fanadinana CEPE izy roa vavy kely anio talata 08 septambra mba hahazoana miditra ambaratonga faharoa